Amaqhinga okudlala amavidiyo e-YouTube kumadivayisi eselula | Izindaba zamagajethi
I-YouTube: izindlela ezihlukile zokudlala amavidiyo akho
Ngokumane usho igama elithi YouTube, abantu abaningi besebevele bazama ukucabanga ukuthi sizozama ukuthini futhi ngokuhamba kwesikhathi, landa ukudlala ividiyo ethi kwikhompyutha yethu. Kulungile manje Ingabe kulula ukulanda konke esikubonayo kungosi ye-YouTube?
Ukube besingazinikela kulokhu, bekungeke kube khona i- hard drive enamandla okugcina wonke amavidiyo esiwathola ku-YouTube, ngoba amanye awo angaba omculo kanti amanye, amadokhumentari noma amafilimu afakiwe. Enye indlela engcono kakhulu yokudlala la mavidiyo incike esidingweni esinaso sesiteshi ngasinye. Manje sizokhuluma ngamaqhinga ambalwa ongawasebenzisa uma kukhulunywa ngawo dlala amavidiyo we-YouTube, ngaphandle kokuzilanda kukhompyutha yakho, okuthile okungenziwa ngaphandle kwenkinga kusuka kuwebhu ngekhompyutha ejwayelekile ngisho nangezesekeli ezimbalwa kumadivayisi eselula.
1 Ezinye izindlela ezihlukile zokudlala amavidiyo we-YouTube
1.1 Izinhla zokudlalayo
1.2 Ukudlala amavidiyo we-YouTube kuselula
1.3 Dlala umsindo wevidiyo ye-YouTube ku-iOS
Ezinye izindlela ezihlukile zokudlala amavidiyo we-YouTube
Njengoba siphakamisile ngaphambili, kule ndatshana sizokhuluma ngezinye izindlela ezihlukile ezikhona zokudlala ividiyo ye-YouTube, into esizoyibhala ngezansi.
Sasike sasho phambilini ukuthi kungenzeka dala izinhla zethu zokudlalayo, kuphi Amavidiyo ethu noma awabanye abasebenzisi abahlukahlukene angabhaliswa. Lokhu kuba yindlela enhle yokudlala amavidiyo we-YouTube ngaphandle kokuwalanda, yize, uma siwadinga kukhompyutha, singakwenza ngethuluzi elikhethekile.
Manje, uma ngomzuzwana othile sithola uhlu lwadlalwayo olunentshisekelo kithi, singalugcina njengolwethu ngale ndlela elandelayo:
Iya kuphrofayela yomsebenzisi lolu hlu lwadlalwayo olukulo.
Khetha ithebhu ethi "uhlu lwadlalwayo" kubha ephezulu ye-akhawunti yakho.
Khetha (ngokuthepha noma ngokuchofoza) uhlu lwadlalwayo esinentshisekelo kulo.
Thinta (noma chofoza) uphawu "+" ngaphezulu ngakwesokudla kwalolu hlu lwadlalwayo.
Ngokulandela lezi zinyathelo ezilula, uhlu lwadlalwayo lomsebenzisi sizosindiswa "njengabethu", lokhu noma singabhalisanga esiteshini sakho.
Ukudlala amavidiyo we-YouTube kuselula
Konke esikubalulile ngenhla kungasebenza kakhulu, okwamanje lapho sizithola sikubona khona Amavidiyo we-YouTube avela kusiphequluli se-inthanethi noma, izinketho ezimbalwa esikhulume ngazo, zingasetshenziswa nakwisidlali kumadivayisi eselula.
Kamuva, i-YouTube ineklayenti layo noma uhlelo lokusebenza lwe-Android ne-iOS uma kukhulunywa ngalo dlala amavidiyo wanoma yisiphi isiteshi. Lapha kukhona inzuzo enkulu ongayisebenzisa, ngoba uma sivula i-akhawunti yethu bese siqala ukuphequlula amavidiyo ahlukile aphakanyiswe lapho, kufanele sikhethe wona kuphela.
Isici esithakazelisa kakhulu esenzeka kule ndawo, ngoba singadlala ividiyo khetha bese uyihudulela phansi. Ngalokhu, ividiyo ye-YouTube izofakwa ebhokisini elincane elibheke ezansi kwesokudla. Lokhu kusebenza kunoma yiluphi uhlobo lwedivayisi yeselula.
Uma sikhetha leli bhokisi elincane lapho kudlala khona ividiyo ye-YouTube bese silidonsela phezulu, lizogcwala isikrini sonke; yebo kunalokho sidonsela ngakwesobunxele, ukudlala ividiyo kwe-YouTube kuzonyamalala.
Dlala umsindo wevidiyo ye-YouTube ku-iOS
Le inketho ethokozisayo engajatshulelwa ikakhulu labo abanamadivayisi eselula ane-iOS, okungukuthi, i-iPhone noma i-iPad. Icebo lisebenza kuphela uma sidlala ividiyo ye-YouTube eSafari esikhundleni sohlelo lokusebenza lweselula.
Ukuvula i-Safari, kufanele sibheke ividiyo ye-YouTube esinesithakazelo kuyo; ngemuva kwalokho kufanele sicindezele inkinobho «Inicio»Ukuze sifinyelele Desktop.
Ngaleso sikhathi kufanele sivule Isikhungo Sokulawula sisebenzisa umunwe wethu futhi sislayidele kuliphaneli elishiwoyo kusuka ezansi kwedivayisi. Izilawuli zokudlala zizovela, kufanele ucindezele eyodwa ye- «play». Ngalokhu, ividiyo ye-YouTube eshiywe kusiphequluli se-Safari izoqala ukudlala kepha ngemuva, okusho ukuthi sizoyilalela kuphela.
Uma sicindezela inkinobho ukucisha isikrini sedivayisi yethu ephathekayo nge-iOS, sisazoqhubeka nokulalela ividiyo ye-YouTube; Lezi zinhlobo zamasu zivame ukusetshenziswa ngabasebenzisi abathile abafuna ukulalela umsindo wevidiyo ye-YouTube kepha ngemuva, bakwazi ukusebenza kunoma yiluphi olunye uhlelo ngaphandle kwenkinga futhi noma ngabe i-iPad noma i-iPhone isicishiwe isikrini .
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-YouTube: izindlela ezihlukile zokudlala amavidiyo akho
Khohlisa ukuvimba oxhumana naye ku-GTalk
Ungasikhubaza kanjani unomphela isifundo sosizo ku-Windows 8.1